Thursday April 18, 2019 - 09:39:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kumanaan katirsan ciidamada sida gaarka u taabacsan Farmaajo iyo Kheyre ayaa saaka lagusoo daadiyay waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho xilli lahadal hayo dibad baxyo ballaaran.
Waddooyinka Wadnaha iyo Makka Al Mukarrama ayaa lagu arkayaa ciidamo wata gaadiidka dagaalka kuwaas oo aad u xakameynaya isku socodka dadweynaha caadiga ah.
Ciidamadan ayey madaxda dowladda Federaalka ugu talagaleen in ay uga hortagaan dibadbax lafilayo in ay ka qeyb galaan Boqolaal kun shacab ah kaasi oo loogasoo horjeedo habdhaqanka dowladda Federaalka.
Saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta Afka dowladda ku hadasha waxaa lagasii daynayay Kalimado xaaraantinimaynaya iskusoo baxyada dowladda ka dhan ah waxaana jeedinaya wadaada xumayaal iyo siyaasiyiin shaqaale u ah dowladda.
Siyaasiyiin iyo Xildhibaanno mucaaradsan Farmaajo iyo Kheyre ayaa iyana shacabka ku dhaqan ugu baaqay in ay dhigaan dibad baxyo ay ugasoo horjeedaan waddooyinka xiran.
Nidaamka ka jira Villa Somalia ayaa wajahaya caqabado dhowr ah waxaana ugu muhiimsan arrinta ammaanka oo fashilka ugu weyn uu ka heysto, iyadoo waddooyinka waaweyn ee caasimadda laxiray ayay Al Shabaab qaraxyo iyo dilal ka fulinaysaa wadada Makka Al Mukarrama oo ay ku yaallaan xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda.